Shir Lagaga Hadlayay Adkaynta Nabadgalyada Xiliga Doorashooyinka Oo Lagu qabtay Boorame | Somaliland.Org
Shir Lagaga Hadlayay Adkaynta Nabadgalyada Xiliga Doorashooyinka Oo Lagu qabtay Boorame
November 19, 2012	Boorame (Somaliland.Org)-Wafti ka kooban 6 xubnood oo ka socda golaha Guurtida Somaliland ayaa maanta kulan balaadhan la yeeshay odayaasha dhaqanka ee G/Awdal, waxana uu kulankani ka dhacay xarunta dawlada hoose ee Boorama.
Badhasaabku xigeenka G/Awdal Cabdi Nuur Sugaal oo kulankani furay ayaa waxa waxa uu sheegay in fadian balaadhan ee ka socda Komishanka ay Maanta odayaasha reer Awdal la yeelanayaan kulan dhinacyo badan taabanaya oo daaran adkaynta nabadgalayada.
Madaxa Wafdigan Guurtida Maxamed Xareed Rooble ayaa sheegay inay ujeedada ay guurtidu maanta u joogto G/Awdal ay tahay in ay odayaasha kala hadlaan sidii ay dhexdhexaadnimada iyo nabadgalyada u ilaalin lahaayeen, waxana uu intaasi daba dhigay in wufuud noocan oo kale ah ay u kala direen dalka oo dhan.
Wafdigan guurtida ayaa waxa kale oo ay ka warameen in ay doorashooyinka maanta dalka ka qabsoomayaa yihiin kuwo xasaasi ah maadaama dhalinyaro badan ay sharaxan yihiin, xamaasada jirtaana ay sababi karto in nabadgalayada la daaro, loona baahan yahay in odayaashu ay qaataan kaalintii wacyigalinta naadgalyada ee mudada doorashadu socoto.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee reer Awdal oo ka hadlay madashan ayaa carab dhabay in G/Awdal aananay uga walwal qabin inay nabadgalyo daro ka dhacdo isla markaana uu yahay meeshii lagu unkay nabada ay Somaliland gabi ahaanteedba ku naaloonayso. Odayaashu waxa ay guurtida laf ahaanteeda ku dhaliileen inay ka gaabinayaan booskii dhexdhexaadnimo ee ay masuuliyadu ka saarnayd maantana ay Boorama yimaadeen iyaga oo aan mudo dheer ka soo war helin, waxana ay ku dardaareen in marka doorashoda lagu dhawaaqo loo baahan yahay marjac dib loogu laabto oo dhexdhexaadnimada ilaaliya. Sidoo kale odayaasha dhaqanka ee reer Awdal waxa ay xuseen in waxwalba ay cadaaladu sal u tahay loona baahan yahay in cadaalada la sugo “ Waxa aan ka codsanaynaa xukuumada iyo komishankaba in cadaalada ay sugaan, waayo cadaalad qofku hadii uu helo ma jirto wax uu nabada u dhimaa, balse hadii la waayo cadaalad wax walba way isku dhex daadanayaan” ayay yidhaaheen odayaasha reer Awdal.
Sidoo kale waxa ay odayaashu xuseen inay marwalba diyaar u yihiin ka shaqaynta nabadgalyada balse aanay xukuumada iyo Guurtida labadaba ka haynin waxii tasiilaad ahaa ee lagu sugayay nabada ee ay ku hawl galayeen odayaasha nabada ka shaqaynaya.
Previous PostGuddida Diiwaan-gelinta oo shaaciyay qaabka ay u kala saarayaan Ururrada tartamayaNext PostJawigii Dhoola-tuskii u dambeeyay Ee Ololaha Ururka UMMADDA iyo Fagaareyaasha dalka	Blog